Johanna Fadul (Danielle oo ku sugan Catalina) ayaa ka dhigtay taageerayaasheeda inay ku waalanayeen sawir aan lahayn geesinimo oo ay muujinayaan badhida. - KU SAMEEYAAN NATIIJADA
Johanna Fadul (Danielle oo ku sugan Catalina) ayaa ka dhigtay taageerayaasheeda inay ku waalanayeen sawir aan lahayn geesinimo oo ay muujinayaan barida.
Sharciga NovelasDADKA & LIFESTYLE
Johanna Fadul , kaas oo qayb ka ahaa taxanaha guusha novelas "Catalina (Sin senos si hay Paraíso)" , halkaasoo ay ku ciyaartay "Daniela Belttaan" , si joogto ah u daabacaan sawiro iyo videos dushiisa shabakadaha bulshada , halka ay ku noqoto kuwa raacsan ee waalan , sababta oo ah qoraalkiisa badankiis wuxuu muujiyaa jir jilicsan.
Dhowr maalmood kahor iyo ka faa’iideysiga waqtigiisa firaaqada, Johanna ayaa leh doonayey inuu sawirro qaado oo tusaysa barida iyo geesinimada , halkaasoo iyada lafteedu ay taas muujiso jirkiisa jecel , xitaa haddii uu leeyahay cellulite .
PDT: Waan jeclahay unugyadayda, waxaan jeclahay jirkeyga, waxaan jeclahay inaanan fiicnayn, ayuu Fadul ku soo qoray bartiisa Instagram-ka.
Iyadoo aan loo eegin waxa laga yaabo inay tahay cillad-darro ku timaadda hab-dhaqannada bulshada maanta, kumanaan ka mid ah kuwa raacsan jilaahan quruxda badan ayaa waalacay sawirradeeda, halkaad ku arki kartaan haweeneydan quruxda badan. oo gashan dharka hoostiisa iyo geesinimo la'aan, oo muujineysa astaamaha iyo qaabkeeda qafiifka ah.
Illaa iyo hadda, daabacaadda Aktarka "Catalina (Sin senos si hay Paraíso)" dhaaftay 181 jecel iyo boqolaal faallooyin ah.
Novelas: FATMAGÜL XUQUUQDA EPISODE 49: Mustafa inta u dhaxeysa Nolosha iyo…
Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa baaraysa xukunka rafcaanka ee Laurent Gbagbo